ပန်းချီတန်း HEC - ရှန်ဟိုင်းရိုးသား Chem ။ ကုမ္ပဏီလီမိတက်
လှုပ်ရှားမှုများ / ပြပွဲ
ပုဂ္ဂိုလ်ရေးစောင့်ရှောက်မှု & အလှကုန်တန်း HEC
စက်မှုဝန်ကြီးဌာနတန်း Ethyl Cellulose
ဆေးဝါးအဆင့် Ethyl Cellulose
Carboxymethyl Cellulose ဆိုဒီယမ်
စားနပ်ရိက္ခာတန်း Carboxymethyl Cellulose ဆိုဒီယမ်
စက်မှုတန်း Carboxymethyl Cellulose
ကိုယ်ပိုင် Level ဒြပ်ပေါင်းများမှာမဟာအသုတ်လိုက်
ကိုယ်ပိုင် Level အင်္ဂတေသည်မဟာအသုတ်လိုက်
Min.Order အရေအတွက်: 25kg
ထောက်ပံ့ရေးနိုင်ခြင်း: 5000 တန် / တစ်နှစ်တာ
ငွေပေးချေမှုရမည့်သက်တမ်း: T / T; L / C သို့မဟုတ်မည်သည့်အခြားသူတွေ
အမည်: Hydroxyethyl cellulose
မော်လီကျူးပုံသေနည်း: [C6H7O2 (OH) 3-x ကို〖 OCH (OH) CH3 〗က x] ဎ
Hydroxyethyl cellulose (HEC) ဓာတုနှင့်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဖြစ်စဉ်များတစ်စီးရီးမှတဆင့် cellulose ကနေဆင်းသက်လာ non-ionic, ရေတွင်ပျော်ဝင်ပေါ်လီမာဖြစ်ပါတယ်။
ထဲမှာပါတဲ့ ဇယား2တွင်ကြည့်ပါ
ဖြေရှင်းချက်ထဲမှာ PH သည် 6.0-8.5
ပုံပန်းသဏ္ဍာန် granules သို့မဟုတ်အမှုန့်
HEC Solutio ဇယား 2. ထဲမှာပါတဲ့ Specification
ပုံစံ ဖြေရှင်းချက်ထဲမှာပါတဲ့ (25 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်, cps မှာ Brookfield)
H ကို 4000 3400 - 5000
H ကို 3000 2600 - 3300
H ကို 2000 1500 - 2500
H ကို 1000 800 -1500
MH 100 ဦး
LH 100 ဦး
HEC ကုန်ပစ္စည်းတစ်ခု 3-သက်တမ်းထပ်တိုးစက္ကူအိတ်, ဒါမှမဟုတ်စက္ကူစည်သို့မဟုတ်စက္ကူသေတ္တာနှင့်အတူအားဖြည့်ထားတဲ့အတွင်းစိတ် polyethylene အိတ်အတွက်ထုပ်ပိုးသည်အသားတင်အလေးချိန်အိတ်နှုန်း 25kg ဖြစ်ပါတယ်။
အစိုဓာတ်နှင့် damp ဆန့်ကျင်ထုတ်ကုန်ကာကွယ်ပါ။
ယခင်: ရေနံတူးဖော်တန်း HEC
နောက်တစ်ခု: ပုဂ္ဂိုလ်ရေးစောင့်ရှောက်မှု & အလှကုန်တန်း HEC
အပူပိုင်းမော်တာများအတွက် Cellulose အီ
ဆံပင်အခြေအနေအရအဆင့် Hydorxyethyl cellulose
HEC အမျှ thickened
HEC သည် Coating ပစ္စည်းများ
ရေနံ Driling သည် HEC
Pertrochemical စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များသည် HEC
HEC ရေနံ Driling အဆင့်
Hydorxyethyl cellulose အလှကုန်အဆင့်
အပိုဆောင်း HEC paint
အပိုဆောင်း Hydroxyethyl Cellulose paint
ခေါင်းလျှော်ရည်အဆင့် Hydorxyethyl Cellulose
ရှန်ဟိုင်းရိုးသား Chem ။ ကုမ္ပဏီလီမိတက်
E-mail ကို: lannie@honestsh.com
E-mail ကို: lannie.zl@263.net
Hydroxypropyl Methyl Cellulose HPMC for l...
Hydroxypropyl Methyl Cellulose HPMC is white or yellowish powder that is odorless,tasteless and non-toxic.It has high hygroscopicity and is soluble in water to formathick liquid. It has good heat-stability, resista...